चाख्ने होइन, अचार ? - नेपाली खोज
इलाम, १९ माघः जाडोमा खानामा पिरोपिरो अचार कति मीठो हुन्छ है । सब्जी, दाल अनि अचारका साथै, अलिलि अकबरे टोक्दै खाना खानुको मजै बेग्लै हुन्छ नि । अनि भनिन्छ नि, थोरै भए पनि अचारले खानालाई स्वादिष्ट बनाउँछ । अचारजस्तो, खाना त्यस्तै । तपाईंलाई अचार के को मन पर्छ ? आँप, तामा, मेथी, अकबरे, लप्सी के को ? मन परेर मात्र के गर्नु पाउनु पनि पर्यो । तर, चिन्ता नलिनु होस्, इलामको एकै ठाउँबाट अनेक प्रकारका अचारका स्वाद चाख्न पाइन्छ । चाख्न मात्र होइन किन्न पनि पाइन्छ । अचार किन्दा स्वस्थकर/अस्वस्थकर भनेर डराउनु पनि पर्दैन । स्वस्थकर अनि स्वादिष्ट, एकपटक चाखे पनि खाउखाउ लाग्ने, खाइरहुँ लाग्ने । यसको बजार हो, इलाम नगरपालिका–७ स्थित नमूना कलेक्सन अचार पसल ।
यो पसल मात्र होइन, अनेक किसिमका अचार यही बनिन्छ । अर्थात अचारको उद्योग नै यही छ । यसका उद्यमी हुन्, चूडामणि रिजाल र सारदा बाँस्कोटा (रिजाल), जोइपोइ । रिजाल दम्पतीको पसल नयाँ किसिमको होइन, नयाँ तरिकाले गरिएको हो । सामान्य अचार जहाँ पनि पाइन्छ, तर मिश्रित अचारले मन तान्छ, जिब्रो रसाउँछ । पसलमै भेटिएका चूडामणिले भन्नुभयो, “नयाँ भेराइटिजको बनाएको हो । धेरै थोक मिक्स गरेर बनाउँछौँ ।” उहाँले थप्नुभयो, “धेरै दुःख गछौँ तर, विकेकै छ ।”
इलामको अकबरे धेरैतिर चर्चित छ । अदुवा त्यस्तै । तर, अहिले पनि बोराका बोरा भारत बेच्दा नेपालमा बजार पाएको छैन । केही हिस्सा नेपालमा खपत हुन्छ तर, यसको बजार भारत हो । रिजाल दम्पतीले यही विषयलाई नजिकबाट बुझेर अचार बनाउन थालेका हुन् । कृषिजन्य उत्पादनको स्थानीयस्तरमा प्रवद्र्धन गर्नपर्छ भन्ने सोच छ उहाँहरूमा । धेरै चीज सम्मिश्रण गरेर अचार बनाउन गाह्रो छ तर, गाह्रो नमानी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पसल हेर्दा लाग्छ, त्यहाँ धेरै थोक छैन तर, पृथक वस्तु छ । जुन किन्नका लागि ग्राहकको भीड लाग्छ । अचारका स्वादका लागि यो पसल सबैथोक हो । यसबाट नयाँ तरिकाले काम गरेमा आकर्षक हुन सक्ने देखिन्छ । गाउँघरमै पाइने अनि खासै प्रयोग हुने सामग्रीबाटै बनिएका सामग्री प्रयोग गर्न जान्दाको परिणाम हो, यो । जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि स्थानीय वस्तुलाई प्रवद्र्धन गर्न पसल र उद्योग खोल्ने सफल भइन्छ भन्ने बुझिन्छ । (रासस)